December | 2012 | Colourful Recipes
2013 – နှစ်သစ်ကြို ညစာစားပွဲ
New year begins, let us pray that it will beayear with peace, happiness and abundance of new friends, God bless us through out the new year.
*.*¸v . ¸•´ ¸´,•*´¨¸ Ձ๏13
” Yangon, Myanmar “
MME 2013 ( Live ) : MRTV – 4
Myanmar New Year’s Eve Countdown 2013 ( Live )
ပွင့် နှင့် ဟာသ သရုပ်ဆောင်များ
Myanmar’s Time : 23:59:20
USA ( East Time ) : 12:29:20
” New York, USA “
NYE 2013 ( Live ) & My Facebook Page
NYE 2013 ( Live ) & My WordPress Page
စားတော်ပဲပြုပ်၊ ထမင်း၊ ဆီ၊ ဆားနှယ်
အပြင်သွားတာတောင် မြန်မာက Myanmar New Year’s Eve Countdown ကြည့်တာ လွတ်သွားမှာ စိုးလို့ .. ဟမ်းဖုန်းဖြင့် ဖမ်းပီး ကြည့်တယ်။
ဒီနှစ် .. နယူးယား ညစာကို မြန်မာစာပဲ စားချင်လာလို့ .. မြန်မာဟင်းပဲ ချက်စားဖြစ်ပါတယ်။
အချို အတွက် .. ရွှေချီ ထိုးတယ်။
ရွှေချီ ၂ ဗန်း ထိုးလိုက်ပီး …
တဗန်းကို အိမ်နီးချင်းကို နှစ်သစ်ကူး လက်ဆောင် ပေးလိုက်တယ်။
ထမင်း စားပီး၊ သောက်ပီး ရေခဲမုန့် စားဖို့ ပြင်နေသော မောင်နှမ နှစ်ယောက်
By Thet Nandar • Posted in Food & Drink	• Tagged colourful recipes blog, food, thiriyatanar
အာဗြဲခြောက်ကြော် - အစပ်